‘फैलिइसकेको थियो भाइरस, बढ्यो परीक्षण, थपिए संक्रमित’ – Health Post Nepal
२०७७ असार १ गते १५:२३
नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ गते कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको ८१ दिनपछि चैत ३० गते संक्रमित संख्या १२ जना पुग्यो। १ सय १२ दिनपछि वैशाख ३१ गते २ सय १९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। जेठ ३२ गतेसम्म ५ हजार ७ सय ६० जना संक्रमित संख्या पुगिसकेको छ ।
जेठ महिनामा संक्रमणको दर ह्वातै बढेको छ। जेठ पहिलो साता (७ जेठ) मा ४ सय २७ जनामा संक्रमण थियो, जबकि दोस्रो साता १ हजार ४२ पुग्यो । त्यसैगरी, तेस्रो सातामा २ हजार ३ जनामा संक्रमण देखिँदा चौथो साता अर्थात २८ जेठमा ४ हजार ३ सय ६४ जना संक्रमित भएको पुष्टि भयो।
यो तथ्यांकले के देखाएको छ भने एक साताको बीचमा संक्रमण दर दोब्बर गतिले बढिरहेको छ। वैशाख अन्तिममा औंलामा गर्न सकिने सीमित संक्रमण संख्या आजभोलि दैनिक ४ सयभन्दा बढीको संख्यामा बढिरहेको छ।
मुलुकको तथ्यांकबाट एक संक्रमित मानिसकोे भाइरसबाट २ देखि ३ जनासम्म सरेको पाइएको छ। तर, हाम्रो देशमा राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुनु तथा मानिसको सम्पर्क बढेका कारण एक संक्रमित मानिसबाट ५–७ जनासम्म भाइरस सरेको अनुमान डा. अधिकारीको छ ।
यो अहिलेको तथ्यांकले देखाएको छ भने संक्रमित संख्या एक सय पुग्नमात्रै धेरै दिन लाग्यो। त्यसपछि संक्रमित संख्या परालको आगो जसरी बढिरहेछ। यो तथ्यांकले नेपालमा कोरोनाले भयावह रूप लिइसकेको संकेत गरेको ग्राण्डी अस्पतालका संक्रामक रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्।
अन्य मुलुकको तथ्यांकबाट एक संक्रमित मानिसकोे भाइरसबाट २ देखि ३ जनासम्म सरेको पाइएको छ। तर, हाम्रो देशमा राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुनु तथा मानिसको सम्पर्क बढेका कारण एक संक्रमित मानिसबाट ५–७ जनासम्म भाइरस सरेको अनुमान डा. अधिकारीको छ ।
परीक्षणको दायरा बढ्दै जानुका अलावा समयमै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुनु, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएका कारणले कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘भाइरसको नियन्त्रण अब कावुबाहिर गइसकेको छ। अहिलेको संक्रमण बढेको तथ्यांक असार महिनाभित्र संख्या ३० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिने अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘यो तथ्यांकले भयावहको रूप लिएको संकेत गरेको छ।’
तराईमा समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिरहेको उनी बताउँछन्। भारतबाट आएका र उनीहरूसँग सम्पर्क रहेका मानिसमा मात्र संक्रमण देखिएको छ।
परीक्षणको मात्रा बढेपछि त्यति नै संक्रमण संख्या पुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
‘आजभोलि ५ हजारभन्दा बढीको परीक्षण हुने गरेको छ । परीक्षणको दायरा बढाएर १० हजार पुर्याउन सकियो भने संक्रमण अहिलेभन्दा दोब्बर भेटिन्छन्,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘तराई क्षेत्रमा संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको छ।’
केही दिनयता नमुना परीक्षण हुँदै गएपछि संक्रमण संख्या बढ्दै गएको छ। परीक्षण सुरु भएको १ सय ३७ दिन (जेठ ३२ ) सम्म १ लाख ३३ हजार ३ सय ७७ जनाको परीक्षण भएको छ।
केहि दिन यता ६ हजारभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ। हालसम्म ७३ वटा जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ।
संक्रमितमध्ये १६.७३ प्रतिशतले कोरोना जिते
प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा संक्रमण दर बढिरहेको छ । प्रदेश २ मा कुल २ हजार १ सय ६ जना संक्रमितमध्ये ४ सय २ ले कोरोना जितेर घर फकिएका छन्। प्रदेश ५ मा १ हजार ६ सय ३५ मध्ये २ सय ९३ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश १ मा ३ सय ७३ संक्रमितमध्ये १ सय ६७ जनाले कोरोना जितेका छन्। वागमती प्रदेशमा २ सय १४ मध्ये ४६ र कर्णाली प्रदेशमा ९ सय ८२ मध्ये २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ५६ मध्ये २७ जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्।
अहिले अवस्थामा गाउँमा संक्रमण पुगि नसकेको हुनाले दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धामा संक्रमणले नदेखिएको कारणले मृत्युदर कम भएको उनको भनाइ छ । ‘जब संक्रमणको विस्तार हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘मृत्युदर बढ्ने निश्चित छ।’
यसरी आइतबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९ सय ६४ जना कारोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । जुन कुल संक्रमणको १६.७३ प्रतिशत हो।
०.३२ प्रतिशत मृत्युदर, श्वासप्रश्वासका कारण धेरैको मृत्यु
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या १९ पुगेका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा धेरै जना जटिल स्वास्थ्य स्थितिबाट मुत्यु भएकाहरू छन्। जुन कुल संक्रमितका आधारमा मृत्युदर ० दशमलब ३२ प्रतिशत हो।
हालसम्मको मृत्युदर हेर्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरूको मृत्यु भएको डा. अधिकारी बताउँछन्। अन्य मुलुकको टे«न्ड हेर्दा ८० प्रतिशत मानिसमा सामान्यता लक्षण देखिँदैन । २० प्रतिशतमा मानिसमा केही लक्षण देखा पर्दछ भने ५ प्रतिशतलाई अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ । ३ प्रतिशतको मृत्यु हुने गर्छ।
तर, नेपालमा कुल संक्रमितमध्ये ० दशमलब ३२ प्रतिशतको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
‘सिरियस केसमा गएकामध्ये सबैको मृत्यु भएको पाइएको छ । मृत्यु हुनेमा युवावर्ग नै छन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धासम्म संक्रमण नपुगेको हुनाले मृत्युदर कम देखिएको हो ।’
मृत्यु भएका १९ जनामध्ये धेरैजसो श्वासप्रश्वासको कारणले मृत्यु भएको छ। हालसम्म १० जनाभन्दा बढीमा निमोनिया र श्वासप्रश्वासको समस्याको कारणले मृत्यु भएको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि कोरोनाले अचानक मृत्यु हुने समस्या देखिएको छ । पहिलेदेखि नै स्वस्थ रहेका युवाको समेत अचानक मृत्यु भएको छ । आइतबार मृत्यु भएका गुल्मी, धुर्कोटका व्यक्तिको खोकी तथा श्वास फेर्ने समस्याका कारण देखिएको थियो ।
त्यसैगरी, बाँकेका २५ वर्षका युवाको पनि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट मृत्यु भएको थियो । अचानक मृत्यु हुने घटना मुख्य रूपमा मुटु र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित जटिल समस्याले हुने विज्ञ बताउँछन् । जसका कारण केहीका मुटुको चालमा घटबढ भएर तत्कालै मृत्यु भएको डा. अधिकारीको बुझाइ छ ।